स्वास्थ्य विमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा डा. राधिका थपलिया • Health News Nepal
काठमाडौं , असार २२ गते
स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा डा. राधिका थपलियालाई नियुक्त गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी अर्को निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि डा. थपलियालाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले शुक्रबार राजीनामा दिएपछि सो पद खाली थियो । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छानिने सो पदका लागि अर्को व्यवस्था नहुन्जेल कामकाजका लागि डा. थपलियालाई नियुक्त दिइएको मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका प्रमुख रघुराम विष्टले जानकारी दिए ।
डा. थपलिया यसअघि राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा तथा सूचना केन्द्रको स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासकको कार्यरत थिइन् ।
Tags: #Health and population ministryCorona Virus #Covid19health insurence